Funda ngeDemon eyaziwayo njengeZoZo
Le Demoni iyaziwa ukuba ibonakale ngee-Yesja Sessions
I-ZoZo yenye yezona zidalwa ezidumileyo neziyaziwayo. Ukusuka kumbonwakude kumabonakude kubonisa iincwadi, i-ZoZo ixelwa ukuba ilandele umsebenzi we-paranormal kunye ne-hauntings.
Akukho mntu uyazi ukuba i-ZoZo ibukeka njani okanye ukuba yintoni yona ngokwenene. Kodwa abo baye badibana naye babika amava amanxantye.
Uninzi luqhagamshelana ngokusetyenziswa kwebhodi ye-Ouija, kubonakala ngathi unedemon enamandla kunye nokwenza umonakalo omkhulu ngokomzimba nangokwengqondo.
Ngamanye amaxesha uhamba ngamanye amagama, njengeZoSo, ZaZa, Zo, okanye iPazuzu. Uye wahlala ngekhulu leminyaka, kunye neengxelo ezibuya emva kowe-1906.
Ngaba i-ZoZo Limited kwi-Ouija?
Nangona i-ZoZo idla ngokuqhagamshelana nokusebenzisa ibhodi ye - Ouija , kunokwenzeka ukuba unxibelelana nabantu abangaphandle komdlalo kunye nangezinye iindlela. Abantu baye baqhagamshelana naye ngexesha le-hypnosis, ii-self-writing sessions kunye neziganeko zezwi le-elektroniki (EVP).
UDarren Evans, indoda evela e-Oklahoma, ngokugqithiseleyo wahlangana noZoZo ngokwakhe. Waqala ukudibana needemon xa edlala nebhodi ye-Ouija kunye nentombi yakhe. Kwabikwa ukuba idemon ikwabelana ngolwazi kunye no-Evans ukusuka ngaphesheya, kwaye waxhalabisa nge-Ouija. Kodwa ekuhambeni kwexesha, idemon yeZoZo yaba yingozi kakhulu.
Ekugqibeleni uEvans waba nexhala, ebiza ukuba iidemon ziyamlandela. Idemon yayisongela nentombazana encinci yakwaEvan, ithi wayeya kuba ngumphefumlo wakhe.
Wafa phantse, kwaye uEvans waqonda ukuba kufuneka athathe inyathelo. Wagqiba ukuphishekela ukukhwabanisa ukuze athathe iZoZo kwintsapho yakhe, kodwa yinto evelelekayo eyashiya impembelelo. U-Evans ngoku ugijimela isayithi elalinikezele ukucebisa abantu malunga neengozi zokungcola ngeZoZo.
Njengeedemon ezininzi, i-ZoZo yenza ukuba waziwa khona.
Ngezantsi zibonakaliso ezimbalwa ezilumkiso ezingabonisa ukuba udibana neZoZo:
Ukunyakaza okukhawulezayo: Ukuba usebenzisa ibhodi ye-Ouija, i-planchette ingaqala ukuhamba ngokukhawuleza. Ukuba wenza hypnosis, i-pendant okanye ipendulu ingaqala ukuguqula.
Izaziso: i-ZoZo inokuzivakalisa ngokupelisa igama lakhe.
Imvakalelo yokungafihli: Unokuziva unomthwalo osisinyuluko wesantya okanye unqabile phezu kwakho.
Ubumnyama: Ungabona izithunzi zihamba, okanye igumbi ohlala kulo lingaba mnyama.
Ukuba uvakalelwa kukuba i-ZoZo ikunye, ungakhathazeki, kodwa yenza isenzo ukuphelisa ukunxibelelana ukukhusela ukulimala komzimba okanye kwengqondo.
Ukuba i-ZoZo idibene nawe, thatha amanyathelo alandelayo ukuze uzikhusele:
Hlalani nizolile: Iidemon kunye nomoya okhohlakeleyo zondla ukwesaba, ngoko zithatha umoya othobileyo kwaye uzinze.
Vala iseshoni: Ukuba udlala i-Ouija, hlela i-planchette ukuba "ulahle" kwaye uvale ngokusemthethweni umdlalo. Ukuba usebenzisa enye indlela yokudibanisa, vala ngokukhawuleza.
Ungathethi igama lakhe: Ukusebenzisa igama lakhe kumnika amandla. Gwema ukuthetha ngaye okanye kuye.
Funa uncedo: Ukuba uziva unayo i-ZoZo kufuphi nawe, funa uncedo oluvela kwi-professional oranormal leader okanye inkokeli yenkolo, njengombingeleli okanye umfundisi.
I-ZoZo yidemon eyingozi kwaye kufuneka usebenzise i-Ouija ngokuqaphele ukuze ugweme ukuthetha naye.
Iintetho ezili-10 eziduduzayo
I-Organic Chemistry Isingeniso
Indlela yokwenza umzekelo weeLung